Fanadinan’ny sekoly tsy miankina :: Ambany ny taham-pahafahana tamin’ny CEPE katolika • AoRaha
Fanadinan’ny sekoly tsy miankina Ambany ny taham-pahafahana tamin’ny CEPE katolika
Manodidina ny antsasa-manilan’ireo mpiadina tamin’ny fanadinana CEPE katolika no nahomby. “Ny 46, 33 % -n’ireo mpiadina maherin’ny sivinjato sy dimy arivo sy dimy alina manerana ny Diosezy rehetra teto Madagasikara no afa-panadinana”, hoy ny mompera Ranaivoson Jules , sekretera jeneralin’ny fampianarana katolika , omaly.
Ambany kokoa io taham-pahafahan’io raha oharina tamin’ny fanadinam-panjakana izay nahatratra 67,55% . Anisan’ny Diosezy namiratra indrindra, tamin’ity andiany voalohany ity, ny tany Ihosy satria 82,49% ny fahombiazan’ny mpianatra. Ny 51,09%-n’ireo mpianatra teto amin’ny Diosezin’Antananarivo ihany kosa no nahazo an’io mari-pahazaina ho an’ny katolika io.
Anisan’ny antony nampidina ny taham-pahafahan’ny mpianatra tamin’ity fanadinana ity kosa ny tsy fanomezan’izy ireo lanja ny taranja fandalinam-pinoana sy ny fanabeazana mikasika ny fiainana sy ny fitiavana. “Tsapa tamin’iny andiany voalohany iny hoe hatraiza ny fiatrehan’ny mpianatra ny tena fiainana katolika satria efapolo ny marik’isa nenjehina tamin’ireo taranja roa ireo”, hoy ny fanampim-panazavan’ny mompera Ranaivoson Jules.
Notsindrian’ity farany kosa fa tanjon’ny teo amin’ny fampianarana katolika tamin’iny fanadinan-dry zareo iny ny ezaka tokony hatao amin’ny lafiny fanabeazana eo amin’ity finoana ity.
“Manana ny lanjany kokoa eo anivon’ny sekoly katolika ireo mpianatra afaka amin’ireo fanadinana katolika satria izahay dia manantitra hatrany ny fanomezan-danja ny fanadinam-panjakana mihoatra an’izany”, hoy ny fanampim-panazavana.
Fantatra fa ireo faritra tsy mandry fahalemana no ratsy ny voka-panadinana, toy ny tany Morombe, izay latsaky ny 10% ny taham-pahafahan’ireo mpianatra. Marihina fa mitovy avokoa ny laza adina nampiasain’ny katolika tamin’io fanadinana io.
Famahana olan’ny famatsiana rano :: Ho vita amin’ny faran’ny herinandro ny toby vaovaon’Amoronankona